FAQs - Zhucheng Shenlong Machinery Fekitori
Nguva yekutungamira ingangoita mwedzi miviri, yekugadzirwa kwemazhinji, nguva yekutungamira ingangoita mwedzi mitatu kana mina mushure mekugamuchira mubhadharo. Nguva dzinotungamira dzinoshanda kana (1) tagamuchira dhipoziti yako, uye (2) tine mvumo yako yekupedzisira yezvigadzirwa zvako. Kana nguva dzedu dzekutungamira dzisingashande neyakafa yako, ndapota enda pamusoro pezvaunoda nekutengesa kwako. Muzviitiko zvese isu tichaedza kugadzirisa zvaunoda. Kazhinji tinokwanisa kuzviita.
T / T uye L / C.